Tany am-boalohany dia tsy nahazo alalana hampiasa vola any amin'ny tsenam-bola ao Dubai na ireo teny tsotra ireo tsy nahazo alalana hividy ny trano fonenana ao UAE sy Dubai. Saingy taoriana kelin'ny fanambaràn'ny lalàna momba ny fananan-tany tao Dubai tao 2002, ny mpampanofa trano sy ny vahiny dia nahazo tombontsoa hampiasa vola amin'ny tsenam-bola ao UAE. Ny governemantam-panjakana dia nanandrana nampiasa vola be mba hananganana ny fotodrafitr'ity tanàna ity mba tsy hiankin-doha amin'ny solika.
Raha jerentsika ao ambadiky ny dingana evolutionary ao amin'ny tsenan'ny trano fananan-tany ao Dubai sy indrindra any Afovoany Atsinanana, dia hita fa nanomboka tamin'ny 1998 ny tsenan'ny trano fanangonam-bokatra vao vita taorian'ny fanombohan'ny fananganana an'i Dubai Marina. Na dia tamin'izany fotoana izany aza dia tsy nisy ny lalàna momba ny fananan'olon-tokana tao UAE. Ny trano fonenana irery ihany no azo ampiasaina amin'ny vola mandritra ny taona 99. Taorian'ny fankatoavana ara-dalàna ny lalàna momba ny fananan-tany ao 2006, ireo olona tsy manana ny GCC (GCC dia misolo ny Filan-kevitry ny fiaraha-miasan'ny Gulf, ahitana an'i Arabia Saodita, Koety, UAE, Oman, Bahrain ary Qatar). Io lalàna io dia niova tanteraka Dubai property market. Nanomboka naneho fahalianana lehibe ireo mpampiasa vola vahiny manerana izao tontolo izao hanao fampiasam-bola goavana amin'ny tetikasa fanorenana tranom-piofanana misy an'i Dubai.
Ny tranom-ponenana ao Dubai dia azo vidiana ho an'ny vahiny sy vahiny. Mety ho an'ny firenena manerana izao tontolo izao ny olona afaka mividy sy mitazona trano fananana mandrakizay raha tsy manapa-kevitra ny hanohy indray amin'ny olon-kafa. Ankoatr'izany, tompon'andraikitra toy izany koa ny tompon'andraikitra tompon'andraikitra amin'ny famelana ny vola azony amin'ny fianakaviany izay mamela azy ireo hankafy ny fananany rehetra. Raha maniry izy ireo dia afaka maimaim-poana hanatsara ny fananany indray mandeha ary omena alalana hanofa azy amin'ny antoko fahatelo. Saingy ireo teboka ireo dia miatrika fepetra sasantsasany amin'ny tetikasa manokana. Ireo fepetra ireo dia ampiharina amin'ny tompony mba hahazoana antoka fa manaraka ny fepetra sasany izy ireo izay mametra azy ireo hanova ny toetra ao amin'ny fananany ary koa hanery azy ireo hihazona ny fananany amin'ny fari-pitsipika sasantsasany rehefa mipetraka ao amin'ny fivoaran'ny fiarahamonina tsy miankina. Ny fividianana trano dia tsy mitovy amin'ny an'ny hividy trano na any an-trano ao Dubai Freehold Property. Ny famarotana trano fividianana trano dia asongadina ho toy ny fandefasana iombonana. Satria ny trano dia ampahany amin'ny tetikasa ary amin'ny maha tompona anao dia tsy maintsy manaraka ny fepetra sasany ianao raha misy fanavaozana sy fanovana ary fanofana hofan-trano. Raha toa ny vahiny na vahiny iray manana Villas dia tsy mila manaraka ny fepetra fanavaozana sy ny fanovana izy fa ny fikojakojana ny fenitry ny fananana dia tokony hokarakaraina.
Ankoatr'i Dubai moa ve Emirà Emirà Emirà Arabo Mitambatra ho an'ny fampindramam-bola vahiny?
Dubai no Emirà Emirà Emirà Arabo mitambatra izay nanome alàlana ny mponina tsy GCC handova fananana tsy tapaka ao amin'ny faritra manokana ao Dubai. Emirà Arabo hafa avy any Emirà Arabo Mitambatra tahaka an'i Sharjah, Abu Dhabi, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah ary Fujairah dia mifantoka hatrany amin'ny fampiroboroboana ny lalànany manokana. Vao haingana i Abu Dhabi (2005) sy Ajman (2006) no nanambara ny fananana tranom-pivarotana azo omena amin'ny sehatra manokana. Ny fanjakana hafa koa dia mifantoka amin'ny fanomezana fahazoan-dàlana ho an'ny vahiny sy vahiny. Na dia liana amin'ny fampivelarana ny trano fonenana aza ny fanjakana dia mbola manambara ihany koa ny lalàna federaly UAE fa tsy misy lalàna momba ny federaly. Tetikasam-pambolena malalaka maro koa dia manome visa na famindrana fahazoan-dàlana amin'ny alalan'ny fividianana. Ary koa ny governemanta dia nanambara ny karazana visa manokana ho an'ny vahiny izay mividy trano ao amin'ny emirate. Ity karazana visa ity dia ahafahan'ny vahiny miaina ao Dubai saingy tsy mamela azy ireo hiasa ao Dubai.
Ireo faritra izay manolotra Properties Freehold ao Dubai
Dubai dia nanjary safidy malaza amin'ireo mpampiasa vola vahiny sy vahiny tsy manana GCC ho an'ireo izay vonona ny hividy ny trano faharoa ao UAE. Mihamitombo ny lazany noho ny toetr'andro, ny tontolo manodidina ny tontolo iainana ary ny mendrika ny hahita toerana. Ny tanàna koa dia manintona mpanao vakansy, mpizahatany sy mpandeha mba handany ny fotoanany. Nanomboka ny tetikasa fananganana tetikasa mipetraka ao amin'ny sehatry ny fambolena sy sehatra ara-barotra ireo mpandraharaha mba hanomezana trano fonenana sy entam-barotra bebe kokoa hividy sy ny mpampiasa vahiny. Ny governemanta ao an-tanàna dia namoaka lisitr'ireo sehatra izay manolotra trano tsy miankina ao Dubai. Ity lisitra ity dia midika ihany koa fa ny tranom-bola tena lehibe dia misy amin'ny faritra toy ny
Ny nosy manerantany
Raha heverinao ny fivoaran'ny sehatra manokana izay manolotra fananam-ponenana maimaim-poana dia ireto tetikasa manaraka ireto.
Ranches Arabo avy amin'ny Emaar Properties
Burj Dubai Fampandrosoana ny tetikasa
Tetikasan'ny tranobe Dubai Marina
Dubai manolotra Properties Freehold mba hividy
Ny governemantan'i Dubai dia nanamarika fa miankina amin'ny solika mba hahazoana fidiram-bola mandritra ny fotoana lava be dia tsy ampy ho an'ny fitomboana ara-toekarena ao amin'ny firenena. Ny mpikaroka dia nahatsikaritra fa tsy hijanona maharitra mandrakizay ireo loharanon-tsolika ireo ary mety hitranga amin'ny taona 2012 izany. Koa satria ny governemanta izay niady mafy tamin'ny fananganana ity tanàna ity ho toy ny orinasa sy fivarotana varotra eo amin'ny firenena tandrefana sy tandrefana dia manambatra ny ezaka amin'ny mpandraharaha ao an-tanàna izany mba hahatonga ny tanàna ho lasa toekarena ara-bola mahomby amin'ny Afovoany Atsinanana ary hampihena ny fianteherany amin'ny solika . Ny governemantam-panjakana dia mifantoka indrindra amin'ny fanatsarana ny indostrian'ny serivisy amin'ny sehatra samihafa, indrindra ny indostrian'ny trano famokarana. Mampiroborobo ny mpizahatany manerana izao tontolo izao ny toeram-pilasiana sy toeram-pizahantany isan-karazany ary nanjary malaza koa eo amin'ireo mpikaroka manerana izao tontolo izao satria manome fahafahana hanao asa tsara izy. Betsaka ny vahiny no mihevitra an'i Dubai hifindra toerana mba hahita asa tsara kokoa sy fampiasam-bola.
Ny mpifindra-monina sy ny mpanao vakansy tonga any Dubai dia mila toerana ho an'ny trano fonenany. Ankoatr'izay, ny olon-tsotra sy ny mpampiasa vola dia mila sehatra hafa hananganana ny orinasany. Mba hanatanterahana ny fangatahana sy ny filàn'ireo mpivarotra sy ireo mpampiasa vola vahiny dia nanolotra fanangonam-bokatra ara-barotra ho an'ireo mpitsoa-ponenana ireo ny Governemanta. Izy io dia manome azy ireo zo hividy na hanatsarana ny trano fonenana tena izy ao anatin'ny fivoarana manokana ao an-tanàna. Mba hanamafisana bebe kokoa ny hasarobidin'ity tanàna ity eo anelanelan'ny roa tadiavin'ny governemanta dia mikasa ny hanolotra visa ho an'ny mpanjifany amin'ny fananan-tany. Ny fiakaran'ny vidim-bary sy ny tetikasa fampandrosoana goavana dia nahasarika ny fampiasam-bola isan-karazany ho an'ny tompon'ny tany sy vahiny fampiasam-bola ao Dubai, miaraka amin'ny tanjona hahazoana tombombarotra tsara.